UDavid Mabuza uzofungiswa njengesekela likaMengameli | News24
UDavid Mabuza uzofungiswa njengesekela likaMengameli
Durban - UMengameli Cyril Ramaphosa umemezele izinguquko kwiKhabhinethi lakhe ngoMsombuluko ebusuku, waveza nokuthi uDavid Mabuza uzofungiswa njengesekela lakhe ngoLwesibili.
Bese kunamahlebezi okuthi vele uMabuza nguye ozothatha lesi sikhundla kulandela ukunyuselwa kukaRamaphosa kwesikamengameli ngemuva kokufakwa amasondo kukaJacob Zuma.
Ngabe ungubani uDavid Mabuza?
IGAMA: UDavid Dabede Mabuza
IMINYAKA YOBUDALA: 57
UMLANDO WOBUHOLI BAKHE: UDavid Mabuza wangena esikhundleni sokuba nguNdunankulu wesifundazwe iMpumalanga kusukela ngomhlala-10 Meyi 2009 futhi wajoyina isigungu esiphezulu se-ANC kusukela ngo-2007.
Lo mholi unomlando kwezembusazwe njengoba ake aba nguNobhala wenhlangano yabafundi i-Azania Student Organisation (AZASO) ngo-1984 kuya ku-1985, wadlulela esikhundleni sokuba nguMgcinimafa we-FEP, waba nangusihlalo wenyunyana yothisha i-SADTU kusukela ngo-1986 kuya ku-1990. Ngale kwalokhu uke waba wungqongqoshe wezemfundo kanye noSihlalo we-ANC nelungu lesigungu esiphezulu esifundazweni iMpumalanga.
UMabuza uchazwe njengomholi onekhono lokukwenza izinto zenzeke ngaphandle kokuphumela obala ngezinhlelo zakhe.
Iningi labantu linethemba lokuthi uMabuza uzokwenza ezibukwayo uma ekhethwa njengePhini likaMengameli we-ANC futhi uma eke wasithola lesi sikhundla, uyohamba naso aze athathe esokuba wuMengameli ngokhetho oluzayo.
OKUHLE: Ngesikhathi engena esikhundleni sokuba wuNgqogqoshe wezeMfundo esifundazweni iMpumalanga ngo-1998 uMabuza wakhuphula izinga lokuphasa lisuka ku-51% layohlala ku-71%.
Njengomholi we-ANC kulesi sifundazwe, wathatha leli qembu linabalandeli abancane kodwa manje sekuyisifundazwe sesibili esinabalandeli abaningi namalungu amaningi avotayo kule nkomfa kazwelonke.
OKUBI: UMabuza usanda kusolwa wuzakwabo kulo mbutho uMattlew Phosa njengozwilakhe okunguyena olawula yonke into kulesi sifundazwe ngisho namaphoyisa imbala.
Usolwa ngokuba nesandla ekukhishweni kwamathenda, ukuhlela ukusocongwa kwabantu nokukhwabanisa amavoti uma kunezinkomfa zikaKhongolose kodwa futhi akakaze aphenywe noma ajeze ngakho konke lokhu. Uyindoda engaqondakali njengoba kungacaci kahle okusuke kusemqondweni wakhe uma ezokwenza izinto.